ရောက်လာသူအပေါင်း မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ
ကဲ ဘော်ဘော်တို. ကြည်.သာ drinks ပေါ.
်မေကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းအတွင်းက ပြည်တွင်းက မိတ်ဆွေတဦးနဲ့ စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။
သူကအနုပညာ အသိုင်းအဝိုင်း က ဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့စကားပြောဖြစ်တဲ့
အကြောင်းတွေကတော့အများကြီးပါ။ အဲသည့်အထဲမှာ များများပြောဖြစ်တဲ့ ကိစ္စကတော့
အရက်အကြောင်းကပိုများပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အရက်တွေဘယ်လို ချက်သလဲ
ဘယ်လိုသိုလှောင်သလဲဘယ်လိုဖြန့်ဖြူး ရောင်းချသလဲ စသဖြင့် စုံနဖာစီ
ပြောဆိုဆွေးနွေးဖြစ်ကြပါတယ်။ အရက်အကြောင်း ပြောဖြစ်သွားတာ ကလဲ ဒီလိုပါ။ ၁၉၉ဝ
ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အရွယ်မတိုင်ခင် အရက်နဲ့ အသက်ဆုံးရှုံး ခဲ့ရတဲ့
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ ပိုများ လာတဲ့အကြောင်း၊ ဒါ့အပြင်
စောစောစီးစီးကွယ်လွန်ခဲ့ကြတဲ့ သက်လတ်ပိုင်း အရွယ်ကောင်း စာပေနဲ့ အနုပညာသည်များ
အကြောင်းကို ပြောရင်း ပြော ရင်းနဲ့အရက်စက်ရုံတွေ အရက်ကို ဘယ်လို ချက်ကြသလဲ
ဆိုတာကနေ စတယ်လို့ ဆိုရင် လည်း မမှားပါဘူး။
မိတ်ဆွေက သူရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြန်ပြောပြပါတယ်။ တခါက ကိစ္စတခုနဲ့
ဆက်စပ်လို့အရက်ချက်စက်ရုံ တခုကို ရောက် သွားပါတယ်တဲ့။ ပထမဆုံး
တွေ့ရတာကတော့အရက်ချက်စက်ရုံဟာ လယ်ကွင်းထဲမှာ ဖြစ်သလို ဆောက်ထားတဲ့ အဆောက်အဦ
ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ အရက်စက်ရုံရဲ့ အပြင်ဘက်မှာတော့ မိုးရွာအစို
နေပူအခြောက်အပုံလိုက်ကြီး ထားထား တဲ့ ထန်းလျှက်ပုံကြီး ရှိနေတာကို
မြင်ရပါတယ်။ယင်ကောင်တွေ တလောင်းလောင်း ဖြစ်နေသလို ထန်းလျှက်ပုတ်နံ့ လိုလို
အနံ့ကြီးကိုလဲ ရှုနေရပါတယ်။ နောက်မြင်ကွင်း တခုကတော့ အရက်ချက်
စက်ရုံကိုဓာတ်မြေသြဇာ လာရောင်းတဲ့ လှည်း တန်းကြီးက မျက်စေ့တဆုံး
ဖြစ်နေပါတယ်။ဓာတ်မြေသြဇာ အိတ်တွေကျတော့ မိုးရွာရင် မိုးစိုမှာစိုးလို့
အရက်ချက်တဲ့ စက်ရုံအတွင်းဖက်ကို ဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာ အလွန်စိတ်ပျက်စရာ
မြင်ကွင်းကတော့ အရက်ဆီ ပေါင်းခံနေတဲ့ ဧရာမ သံကန်ကြီးတွေထဲကို
ဓာတ်မြေသြဇာအိတ်တွေဖွင့်ပြီး ဖြောကနဲဖြောကနဲ လောင်း ထဲ့ နေတာပါဘဲ။ ဓာတ်မြေသြဇာ
စိုက်ပျိုးရေး အတွက်သုံးတဲ့ ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်းတွေပါ။ လူသောက်မဲ့ အရက်ကို
ချက်တဲ့နေရာမှာပေါပေါလောလော သုံးနေတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ကောင်းနိုင်မယ် မဟုတ်ပါ။
သို့သော်အရက်စက်ရုံက တာဝန်ရှိတဲ့သူကတော့ သူတို့ စက်ရုံက
ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ အရက်ဆီဟာ ဘယ် လောက် ကောင်းကြောင်း ဘယ်လောက်ပြင်းအားရှိကြောင်း
ရှင်းပြနေ ပါသေးတယ်။ အဲသလို ထုတ်လုပ် လိုက်တဲ့ပြင်းအားမြင့်အရက်ဆီကို
ဈေးကွက်မတင်ခင် ဂိုဒေါင်ထဲမှာ နှစ်လလောက်
ထားရပါတယ်။ အရက်မှာပါနေတဲ့ အဆိပ်ဖြစ်စေတဲ့ ဓာတ်တွေ အခိုးပြန်သွားစေဖို့
အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်လပြည့် သွားတဲ့ အခါကျမှ ရေငါးဆ ရောပြီး
ပုလင်းသွတ်တံဆိပ်လှလှလေးတွေ ကပ်တဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ရပါတယ်။ အဲဒါတွေ ပြီးရင်တော့
ဆိုင်တင်ရောင်းရုံဘဲလို့ဆိုပါတယ်။ သို့သော် ဈေးကွက်တောင်းဆိုမှုက မြင့်မားနေတဲ့
ဂိုဒေါင်ထဲမှာ ဘယ်တော့မှ နှစ်လကြာအောင် အထိ မထားဘဲ
ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဈေးကွက်ထဲကို တင်သွင်းလေ့ ရှိတယ်လို့လဲ သိရပြန်ပါတယ်။
အဲသလို အရက်မျိုးတွေကို သုံးလေးနှစ် ဆက်တိုက်သောက်နေတဲ့ သူတွေဟာ
အသဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရောဂါတခုခု ရကြပါတယ်။ အဓိကတော့
ဓာတ်မြေသြဇာကိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဓာတ်မြေသြဇာဆိုတာ အက်စစ် တမျိုးပါ။
ပိုသုံးရင် စပါးပင်တွေတောင် သေနိုင်တဲ့အထိ ပြင်းအား ရှိပါတယ်။ အနုပညာသည်လောကမှာ
တချို့သော အရွယ်ကောင်း လူလတ်ပိုင်း တွေဟာ မနက်ကိုးနာရီဆယ်နာရီလောက် ကထဲက
စသောက်ကြပါတယ်။ ညအိပ်ရာဝင်မှ အသောက်ကို ရပ်ပါတယ်။ အဲသလိုအရက်မျိုးတွေကို
မနက်ကထဲက သောက်သူတွေဟာ ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်နဲ့ သေဆုံးကြပါတယ်။
တလောက နာမည်ကြီး စာပေသမားတဦး အရွယ်ကောင်းတုန်းမှာ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါလဲ
အဲသလို အရက်မျိုးတွေကို ဆက်တိုက်သောက်လို့ ဖြစ်တာလို့ မိတ်ဆွေကရှင်းပြပါတယ်။
ကျနော်တို့နိုင်ငံက စာပေလောကနဲ့ အနုပညာသည်လောကမှာ အရက်သောက်တာ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။
အတော်များ များ သောက်တတ် ကြတဲ့သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုခေတ်တုံးကဆိုရင်
စာရေးဆရာကြီး သော်တာဆွေဟာ အရက်နဲ့ ပတ်သက်ရင်
နာမည်ကြီးတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ "ဘရန်ဒီတခွက်ဆိုတဲ့" ဟာသ ဝတ္ထု တိုနဲ့
စာပေလောကထဲစရောက်ခဲ့တယ်လို့ ကြားဘူးပါတယ်။ အရက်အကြောင်း
လူကြိုက်အောင်အဖွဲ့အနွဲ့တွေနဲ့ ရေးတတ်လွန်းလို့ ဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာက တောင်
လူငယ်တွေ အရက်မသောက် သောက်တတ် အောင် သင်ပေးသလို ဖြစ်နေတယ်" လို့ထောက်ပြဆုံးမခဲ့
ဘူးပါတယ်။ ထားပါတော့။ ဆိုလိုချင်တာက ဒီလိုပါ။ ဆရာသော်တာဆွေဟာ ငယ်ရွယ်စဉ်က
အရက်သောက်ကြမ်းခဲ့ တယ်။ သို့သော်
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ မသေ ခဲ့ ပါဘူး။ အသက်ကြီးမှ ဆုံးသွားခဲ့တာပါ။
ဆရာသော်တာဆွေတို့နဲ့ခေတ်ပြိုင် နာမည်ကြီး စာရေးဆရာတဦး အရက်ကြောင့်
စောစောစီးစီး ကွယ်လွန်ခဲ့တာရှိဖူးပါတယ်။ အရက်မူးနေတုန်း အင်းလျား ကန်မှာ
ရေနစ်ပြီး ဆုံးသွားခဲ့တာပါ။အဲသည့်ခေတ်တုံးက အရက်တွေက သတ်မှတ်ထားတဲ့ နည်းစနစ်တွေ
ချက်လုပ်ခဲ့တဲ့ အရက်များ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဓာမြေသြဇာတွေ
လှိုင်လှိုင်ထည့်ပြီးချက်ခဲ့တဲ့ အရက်တွေတော့ ဖြစ်ဟန် မတူပါဘူး။
တချိန်တုံးက မြန်မာပြည်မှာ အသောက်များခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး အရက်တွေကတော့
မန္တလေးရမ်နဲ့ ဘီအီးဒီစီိလို့ ခေါ်တဲ့ အရက်ဖြူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မော့ဝီစကီတို့လည်း ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါ သေးတယ်။ အရက်သောက်တာများရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာ
လူတိုင်းနားလည်ပါတယ်။ သို့သော် အဲသည့် အရက်တွေကို
ထုတ်လုပ်တဲ့ ခေတ်တုန်းက သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဆင့်အတန်းစံချိန်အတိုင်း
ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတာ မို့လို့ နဲနဲတော့ ခံသာသေးတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ အရက်ချက်တဲ့အခါ စနစ်တကျ ချက်ကြပါတယ်။ အဲသလို
စနစ်ကျဖို့ကိုလည်း စောင့်ကြည့်နေတဲ့ တာဝန်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများလည်း ရှိပါတယ်။
ဆိုလိုချင်တာကတော့ foodsecurity လို့ခေါ်တဲ့ စားသုံးကုန်လုံခြုံရေးကို အမြဲ
မျက်ချေမပြတ်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတဲ့ စနစ်ရှိနေပါတယ်။ ဥပမာ တခုလောက်
စကော့ဝီစကီများ ချက်ပါတယ်။ ချက်တဲ့အခါမှာလည်း
အုပ်စပါးတို့ဘာလီစပါးတို့ကိုသုံးပါတယ်။ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ မသုံးပါ။ မသုံးရပါ။
ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်းလို့ပြောရမဲ့ဟာ တခုကတော့ "ယိစ်" လို့ခေါ်တဲ့ တဆးတမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
အဲသည့်ယိစ်ကလည်း တကယ်ဆိုရင် သဘာဝဓာတု ပစ္စည်းပါ။ သဘာဝမှို တမျိုးပါ။
ပြီးတော့အလွန်သန့်ရှင်းတဲ့ သန့်စင်ထားတဲ့ မိုးရေကိုအသုံးပြုပြီး
ချက်ပါတယ်။ ကြုံရာရေပိုက်က၊ ချောင်းမြောင်းက၊ ရေတွင်းက ရေတွေနဲ့
အရက်ကိုချက်လုပ်ခြင်း မပြုပါဘူး။ မြန်မာပြည် မှာလို
ဓာတ်မြေသြဇာတွေထဲ့ပြီးချက်လို့ကတော့ တရားစွဲခံရလို့ အလျှော်တွေ
ပြုတ်ပြီး ထောင်တောင် ကျပါဦးမယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ အရက်ချက်ဖို့လိုင်စင်ကလည်း
လာဘ်ထိုးလိုက်ရင် လွယ်လွယ်နဲ့ ရနေပါတယ်။ အရက်ကိုစည်းစနစ်တကျ ချက်မချက်ဆိုတာကို
စောင့်ကြည့်တဲ့ စနစ်ဇယား မရှိတော့
ချက်ချင်သလို ချက်နေကြတာပါ။ အဲသလို အရက်မျိုးတွေကို နေ့တဓူဝ
သောက်နေမှတော့ရောဂါရပြီး ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သေတာ မဆန်းပါဘူး။
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မသေတောင် အသက်ငါးဆယ် ကျော်တန်း လောက် ဖြစ်လာရင် အသည်းကို
ထိခိုက်လာတာများလို့ သူများထက်အရင် သွားရဖို့ များပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အရက်တွေက အရည်အသွေးလည်း မမှန် အဆိပ်အတောက် တွေကလည်း အများအပြား
အရက်ထဲမှာ ကျန်နေသေးတော့ အရက်သောက်များရင် အသက်တိုတာ အမှန်ပါဘဲ။အရက်အကြောင်း
နဲနဲလောက် ဇာချဲ့ပြောချင် ပါသေးတယ်။ စကော့တလန်က
ထုတ်လိုက်တဲ့ဝီစကီများအကြောင်းပါ။ သာမန် ဈေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းချတဲ့ဝီစကီများဟာ
ထုတ်ပြီးတာနဲ့ သစ်သားစည်ကြီး တွေမှာထဲ့ပါတယ်။ ပုလင်း မသွတ်သေးပါဘူး။
အဲသည့်စည်ကြီးတွေကို တနှစ်လောက် ဂိုဒေါင်ထဲမှာ သိမ်းထားပါတယ်။
အရက်ကိုဓာတ်မြေသြဇာလို ဓာတုဗေဒပစ္စည်း မပါဘဲ သဘာဝအတိုင်းချက်တာတောင်
အရက်ထဲမှာလူကိုအန္တရာယ် ဖြစ်စေတဲ့ toxic လို့ခေါ်တဲ့ အဆိပ်ဓာတ်တွေ
အဲဒါတွေ လျှော့ပါးအောင် အရက်ကို ဂိုဒေါင်ထဲမှာ သိမ်းထားရပါတယ်။
အဲသည့်အဆိပ်ဓာတ်များဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အငွေ့ပျံပြီး လေထုထဲကို
ရောက်သွားပါတယ်။သို့သော် အရက်မှန်သမျှ ဈေးပေါသည် ဖြစ်စေ ဈေးကြီးသည်ဖြစ်စေ
လူကိုအဆိပ်ဖြစ်စေတဲ့ ဓာတ်ဟာ ကျန်နေပါသေးတယ်။ အနည်းဆုံး
တနှစ်လောက်သ်ိမ်းထားရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သစ်သား စည်ကြီးတွေထဲမှာ
နှစ်ကြာကြာသိမ်းထားတဲ့ အရက်အမျိုးအစားဟာ အဆိပ်ဓာတ်တွေ ပိုလျှော့သွားပါတယ်။
နှစ်ကြာလာတာနဲ့အမျှ တန်ဖိုးကြီး လာပါတယ်။ပုလင်းသွပ်ပြီးမှ ဆက်သိမ်းထားရင်
အဆိပ်ဓာတ်တွေဟာ လေထုထဲကို အငွေ့ပျံပြီး
မတက်နိုင်တော့လို့ပါ။ ဒါကြောင့် စကော့တလန်က ထုတ်လုပ်တဲ့ ဝီစကီတွေမှာ
(၁၂)နှစ်အထိ ကြာအောင် သစ်သားစည်ကြီးတွေထဲမှာ သိမ်းထားပြီးမှ
ပုလင်းသွတ်တဲ့အရက်တွေက ဈေးပိုပေးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခါ အမျိုးအစား အပေါ်မူတည်ပြီး
(၁၂)နှစ်၊ (၁၆) နှစ်၊ (၁၈) နှစ်၊ (၂ဝ) နှစ်၊ (၂၅)နှစ် စသဖြင့် ရှိကြပါတယ်။
အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေတဲ့ ဓာတ်တွေလျှော့ပါးသထက် လျှော့ပါးလာလို့ သောက်တဲ့အခါမှာ
လူကိုဥပါဒ် ပေး တဲ့နှုန်း လျှော့လာပါတယ်။ သို့သော်သက်တမ်းရင့် အရက်ဆိုပြီး
သောက်ခြင်သလို သောက်နေရင်လည်း အသည်းရောဂါ ဖြစ်ပါ
တယ်။ ရောဂါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါ။
ဝီစကီထက်အဆိပ်အတောက်နည်းတဲ့အရက်က ဗော့ဒကာလို့ ခေါ်တဲ့ အရက်ဖြစ်ပါတယ်။
ရုရှား၊ဖင်လန်၊ ပိုလန်၊ ဆွီဒင်နဲ့ဆိုဗီယက်ရုရှားခွဲထွက် နိုင်ငံများမှာ
ရောင်းအားအပေါ် မူတည်ပြီး လွယ်လွယ်ချက် ဈေးပေါပေါနဲ့ ရောင်း ကြလို့
အခုရုရှားနိုင်ငံမှာ ဗော့ဒကာ အပေါစား
သောက်ကြတဲ့ သူများ အထူးသဖြင့် ဆင်းရဲတဲ့သူများ အသက် (၅ဝ)
ကျော်ကျော်မှာသေဆုံးတဲ့နှုန်း များလာနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အရက်သေစာထဲမှာ
အဆိပ်အတောက်အနဲဆုံးကတော့ ဝိုင်အရက် ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဝိုင်အရက်ဟာ
အနောက် နိုင်ငံများ တင်သွင်းတာမို့ အရှေ့ တိုင်းနိုင်ငံများမှာ
ဈေးကြီးပါတယ်။ဆင်းရဲသူများ ဝယ်ယူသောက်သုံးဖို့ မတတ်နိုင် ကြပါ။ ဝိုင်အရက်ဟာ
အဆိပ်အတောက်နည်းတယ်ဆိုပေမဲ သူ့ကိုလည်းစိတ်ကြိုက်သောက်ချင်သလို သောက်ရင်တော့
လူကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေပါတယ်။
အုပ်ချုပ်သူ စစ်အစိုးရဟာ မြန်မာပြည်က အရက်ကုမ္ပဏီတွေ အရက်ချက်စက်ရုံတွေကို
ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေက ပိုက်ဆံရတိုင်း
စားသုံးတဲ့ သူတွေ ဒုက္ခရောက် ရပါတယ်။စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်းအားလုံးကို
စနစ်တကျ ဖြစ်လာစေဖို့ နည်းနာတွေ၊ ဥပဒေသတွေ ရှိဖို့လိုနေပါပြီ။တလောတုံးကလည်း
လဖက်တွေမှာ ဆိုးဆေးတွေ ပါတယ်ဆိုပြီး လက်ဖက်
တံဆိပ်တော်တော်များများ ရောင်းချခွင့် အပိတ် ခံရပါတယ်။ နောက်တော့ငါးပိတွေလည်း
ဆိုးဆေးပါတယ်လို့ ကြားရပြန်ပါတယ်။ အရက်ကိစ္စကိုတော့ စစ်အစိုးရကဘာမှ မပြောဘဲ
အရေးမယူဘဲ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ မဟုတ်မှလွဲရော
အရက်ကုမ္ပဏီတွေမှာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ သူတို့ ဆွေမျိုး တွေရှယ်ယာပါထားလို့ဘဲ
ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ အရက်နဲ့ သေခဲ့ရတဲ့ စာပေနဲ့ အနုပညာလောကက လူလတ်ပိုင်း အရွယ်
ကောင်းတွေကို ပမာထားပြော ရတာကတော့ မြင်လွယ်အောင်သိသာအောင် တင်ပြရတာပါ။
သာမန်လက်လုပ်လက်စားတွေ အရွယ်မတိုင်ခင်မှာ ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ ချက်တဲ့ စိတ်မချရတဲ့
အရက်ဆိုးတွေကို သောက်သုံးကြလို့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာ တနှစ်တနှစ် ဘယ်လောက်သေနေရ
မြန်မာပြည်မှာ အရက်ရောင်းချခြင်းဟာ တော်တော်လေး ဖွံ့ဖြိုးလာတာနေတာ အမှန်ပါဘဲ။
သို့သော် စိတ်ချရပြီး စနစ် တကျ ရှိတဲ့အရက်ချက်လုပ်ခြင်းမဖွံ့ဖြိုးသေးဘူး
ဆိုတာကိုလည်း မြင်နေရပါတယ်။ သို့သော် တဖက်မှာ ကြည့်လိုက်ပြန် တော့လည်း
ဓာတ်မြေသြဇာလိုဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေကို သုံးပြီး အမြန်ချက် အမြန်ရောင်းတဲ့
နေရာမှာတော့စကော့တလန် က ဝီစကီချက် သူတွေတောင်လိုက်မမှီအောင်
Posted by soe thiha at 10:18 PM No comments:
ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ.အစည်းကို " ကမ္ဘာ.အမွန်မြတ်ဆုံး/ အကောင်းဆုံး " ဘာသာတရားဆုချီးမြှင့်
Posted by MYANMAR MP3 on December 11, 2009 at 12:42pm
View MYANMAR MP3's blog
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ဂျနီဗာမြို.အခြေစုိုက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘာသာရေးနှင်.အသိဥာဏ်မြင်.မားရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ.ကဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ.အစည်းကို " ကမ္ဘာ.အမွန်မြတ်ဆုံး/အကောင်းဆုံး " ဘာသာတရားဆုချီးမြှင်.ခဲ.ကြောင်းသိရှိရပါတယ်...အဆိုပါအထူးတစ်လည်ချီးမြှင်.တဲ.ဆုကိုကမ္ဘာ.ဘာသာပေါင်းစုံမှကိုယ်စားလှယ် ၂၀၀ ကျော်ကရွေးချယ်ချီးမြှင်.ခဲ.ခြင်းဖြစ်ပြီးပို၍၀မ်းမြောက်အံ.သြဖွယ်ကောင်းသည်မှာပါဝင်ရွေးချယ်သည်.ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အများစုကအဆိုပါအဖွဲ.အစည်းတွင်အဖွဲ.ခွဲဝင်အနည်းဆုံးဖြစ်သောဗုဒ္ဓဘာသာကိုမိမိတို.ဘာသာထက်ကျော်လွန်ပြီးဆန္ဒမဲပေးခဲ.ကြခြင်းဖြစ်သည်...ပါဝင်ဆန္ဒမဲပေးခဲ.သူလေးဦးကပြောဆိုခဲ.ရာတွင်...အဆိုပါအဖွဲ.ကြီး၏သုတေသနညွန်ကြားရေးမှူး Jonna Hult က " ဒီကမ္ဘာ.အမွန်မြတ်ဆုံး၊အကောင်းဆုံးဘာသာတရားဆုကိုဗုဒ္ဓဘာသာက ရရှိတာအံ.သြစရာမရှိပါဘူး...ဘာဖြစ်လို.လည်းဆိုတော.ကမ္ဘာပေါ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကြောင်.ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်ခဲ.တဲ.စစ်ပွဲဆိုတာမရှိခဲ.ပါဘူး...တစ်ခြားဘာသာများနဲ.မတူတာကအဲဒါပါပဲ...တစ်ခြားဘာသာတွေကအကယ်၍ဘုရားသခင်သာမှားယွင်းခဲ.ယင်ဆိုတဲ.အတွေးနဲ.လက်နက်တွေကိုအရံသင်.ထားကြပါတယ်...ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဟာ(ဘာသာရေးအတွက်နဲ.) စစ်တိုက်တာကိုတွေ.ရဖို.အတော်ခဲယဉ်းပါတယ်...တစ်ခြားဘာသာဝင်တွေရဲ.အစဉ်အလာအလေ.အထနဲ.ဆန်.ကျင်စွာပဲဗုဒ္ဓဘာသာဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင်.ကြံတဲ.တရားကိုသာသူများကိုဟောကြားခဲ.တာပါပဲ " လို.ဆိုခဲ.ပါတယ်...Belfast မြို.မှ ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီး Ted O'Shaunghnessy ကတော.ကက်သလစ်သာသနာကိုမြတ်နိုးကိုကွယ်ပေမယ်.လူသားတွေကိုမေတ္တာဂရုဏာထားရန်ဟောကြားပြီးလူသားတွေကိုပဲသတ်ဖြတ်ကာဘုရားသခင်ရဲ.အလိုဆန္ဒနားလည်ပါတယ်လို.ပြောကြတာကစိတ်အနှောက်အယှက်အဖြစ်ရဆုံးပါပဲ...ဒါကြောင်.မွန်မြတ်တဲ.ဗုဒ္ဓဘာသာကိုမဲပေးခဲ.တာပါလို.အမိန်.ရှိခဲ.ပါတယ်....ပါကစ္စတန်ကမွတ်ဆလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်Tal Bin Wassad ကလည်းဒီအဆိုကိုသဘောတူထောက်ခံခဲ.ပါတယ်...အဆိုပါအဖွဲ.ကြီးရဲ.ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမွတ်စလင်အစည်းအရုံးဆိုင်ရာမဲပေးရေးအဖွဲ.၀င်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ.သူက " ကျွန်တော်ဟာအစ္စလာမ်ဘာသာကိုနှစ်နှစ်ကာကာယုံကြည်သူတစ်ယောက်ပါ...သို.သော်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာခံစားချက်ထက်ဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးအမျက်ဒေါသတွေထွက်ကြ၊သွေးမြေကျကြရတာတွေကိုတွေ.မြင်ခံစားရပါတယ်...ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော.အဲဒါကိုသိမြင်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ.ကြပါတယ်...ပြောရယင်ကျွန်တော်.ရဲ.အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေတစ်ချိူ.ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ "လို.ပြောခဲ.ပါတယ်...အစ္စရေးနိုင်ငံဂျေရုဆလင်မြို.ကဂျူးဘုန်းတော်ကြီး Shmuel Wasserstein ကတော. " ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်.ဘာသာဖြစ်တဲ.ဂျူဒါအစ်ဇင် ကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးပါတယ်...ကိုယ်.ဘာသာမို.ကိုယ် ဒါဟာကမ္ဘာ.ပေါ်မှာအကြီးမြတ်ဆုံးဘာသာတရားလို.လည်းထင်ပါတယ်...ဒါပေမယ်.ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံရယင်ကျွန်တော်ဟာနေ.စဉ်ဂျူးဘာသာအရ၀တ်မပြုခင်ဝိပဿနာတရားကိုကျင်.ကြံအားထုတ်နေတာ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကတည်းကပါ...ဒါကြောင်.အခုလိုမဲပေးလိုက်ပါတယ် " လို.ပြောလိုက်ပါတယ်...သို.သော်..စိတ်မကောင်းစရာအချက်တစ်ခုက အဆိုပါအဖွဲ.ကြီးအနေဖြင်.ထိုဆုကိုလက်ခံမည်.သူတစ်ယောက်ကိုမျှမတွေ.ခဲ.ရပေ....သူတို.ဆက်သွယ်ပြောဆိုသမျှဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးကထိုဆုကိုလက်ခံဖို.ငြင်းပယ်ခဲ.ကြခြင်းဖြစ်သည်...အဘယ်ကြောင်.ထိုဆုကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်ရကြောင်းမေးမြန်ခဲ.ရာမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းဘုန်းတော်ကြီးဂုရတ္တက " ယခုလိုမိမိတို.ဘာသာကိုအသိအမှတ်ပြုချီးမြှင်.သည်.အတွက်ဝမ်းမြောက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ...သို.သော်ဒီဆုကိုအမြတ်ဆုံးလွတ်မြောက်မှုနိက္ခမဓါတ်၊နိဗ္ဗာနဓါတ်ကြိုးစားအားထုတ်ကာရရှိနိုင်သည်.လူသားအားလုံးကိုမိမိတို.မျှဝေပေးအပ်ပါကြောင်း..." မိန်.ကြားခဲ.ပါတယ်...အဖွဲ.ကြီးအနေနဲ.ထိုဆုကိုလက်ခံရယူပေးမယ်.သူကိုဆက်လက်ဆက်သွယ်နေဦးမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်....တရားအရသာသိတဲ.သူတွေကတော.ကိုယ်တိုင်ကိုလက်တွေ.ကျင်.ကြံအားထုတ်နေကြပြီ...တရားမသိ၊အမှားပြည်.နေတဲ. ...ကျွန်တော်တို.ငမိုက်သားများကတော. ...ဒီသံသရာရေယာဉ်ကြောမှာ ...မြောလို.ကောင်းနေဆဲ....မူရင်းသတင်းလေးကတော.ဒီလိုပါ...The Geneva-based International Coalition for the Advancement ofReligious and Spirituality (ICARUS) has bestowed "The Best Religion Inthe World" award this year on the Buddhist Community.This special award was voted on by an international round table of more than 200religious leaders from every part of the spiritual spectrum. It wasfascinating to notethat many religious leaders voted for Buddhism rather than their ownreligion although Buddhists actually make upatiny minority of ICARUSmembership. Here are the comments by four voting members:Jonna Hult, Director of Research for ICARUS said "It wasn'tasurpriseto me that Buddhism won Best Religion in the World, because we couldfind literally not one single instance ofawar fought in the name ofBuddhism, in contrast to every other religion that seems to keepagunin the closet just in case God makesamistake. We were hard pressedto even findaBuddhist that had ever been in an army. These peoplepractice what they preach to an extent we simply could not documentwith any other spiritual tradition."A Catholic Priest, Father Ted O'Shaughnessy said from Belfast , "Asmuch as I love the Catholic Church, it has always bothered me to noend that we preach love in our scripture yet then claim to know God'swill when it comes to killing other humans. For that reason, I didhave to cast my vote for the Buddhists."A Muslim Cleric Tal Bin Wassad agreed from Pakistan via histranslator. "While I amadevout Muslim, I can seehow much anger andbloodshed is channeled into religious expression rather than dealtwith onapersonal level. The Buddhists have that figured out." BinWassad, the ICARUS voting member for Pakistan 's Muslim communitycontinued, "In fact, some of my best friends are Buddhist."And Rabbi Shmuel Wasserstein said from Jerusalem, "Of course, I loveJudaism, and I think it's the greatest religion in the world. But tobe honest, I've been practicing Vipassana meditation every day beforeminyan (daily Jewish prayer) since 1993. So I get it."However, there was one snag - ICARUS couldn't find anyone to give theaward to. All the Buddhists they called kept saying they didn't wantthe award.When asked why the Burmese Buddhist community refused the award,Buddhist monk Bhante Ghurata Hanta said from Burma, "We are gratefulfor the acknowledgment, but we givethis award to all humanity, forBuddha nature lies within each of us." Groehlichen went on to say"We're going to keep calling around until we findaBuddhist whowill accept it. We'll let you know when we do."Gmail တစ်ခုမှ တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်.....
Posted by soe thiha at 3:57 AM No comments:
ဒူးမတုန်နဲ့ကလေးဒီလိုထရပ်လိုက်တာကိုကခြေလှမ်းတွေစနိုင်ဖို့အတွက်ပါပဲ။ရပ်နိုင်တော့မှမင်းဘ၀ရဲ့ ပထမခြေလှမ်းမင်းစပြီးလှမ်းရမှာ…။ကြောက်စိတ်မ၀င်နဲ့ကလေးပထမခြေလှမ်းမှယိုင်လဲဒူးပြဲချင်ပြဲမယ်လဲရင်ပြန်ရပ်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေစမယ်။လေးဖက်တွားရင်းကျေနပ်ထပြီးမရပ်ဘဲနေမယ့်အစားရပ်စမ်းလဲစမ်းရဲရဲလှမ်း ကလေး…(ပြီးရင်)ပြေးလမ်းပေါ်တက်ကြရအောင်။
Posted by soe thiha at 3:56 PM No comments:
တစ်ခါက လူတွေကို အရမ်းကူညီတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ သေဆုံးပြီးနောက် ကောင်းကင်ဘုံရောက်ပြီး နတ်သားဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ နတ်သားဖြစ်သွားသည့်တိုင် သူဟာ လူ့ပြည်ကိုဆင်းပြီး လူတွေကို အကူအညီတွေ ပေးခဲ့ပြန်တယ်။ လူတွေဆီကနေ ပျော်ရွှင်ခြင်းရနံ့တွေ ရှုရှိုက်နိုင်ဖို့ သူမျှော်လင့်ကြိုးစားခဲ့တယ်။
တစ်နေ့မှာ နတ်သားဟာ အခက်အခဲကြုံနေပုံရတဲ့ လယ်သမားတစ်ဦးနဲ့ ဆုံခဲ့တယ်။ လယ်သမားက နတ်သားကိုတွေ့တာနဲ့ "ကျွန်တော့်အိမ်ကကျွဲ သေသွားလို့ လယ်တွေကို ကျွန်တော် ဆက်မထွန်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်" လို့ ရင်ဖွင့်တယ်။
လယ်သမားစကားကို ကြားတော့ နတ်သားက သန်မာတဲ့ ကျွဲတစ်ကောင် ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်။ လယ်သမားဆီကနေ ပျော်ရွှင်ရနံ့ကို နတ်သားရှုရှိုက်လိုက်မိတယ်။
နောက်တစ်နေ့မှာ နတ်သားက စိတ်ပျက်လက်ပျက် ထိုင်ငေးနေတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံပြန်တယ်။ နတ်သားကိုတွေ့တော့ အဲဒီလူက "ကျွန်တော်ငွေတွေ လူလိမ်လို့ ကုန်ပြီဗျာ၊ ရွာပြန်ဖို့ လမ်းစရိတ်မရှိလို့ပါ" လို့ ပြောတော့ နတ်သားက သူ့အတွက် လမ်းစရိတ် ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီလူဆီက ပျော်ရွှင်ရနံ့က နတ်သားဆီကို လွင့်လာခဲ့တယ်။
တစ်နေ့မှာ နတ်သားဟာ ကဗျာဆရာတစ်ဦးကို တွေ့ပြန်တယ်။ ကဗျာဆရာက ငယ်ရွယ်နုပျို ချောမောပြီး၊ ငွေကြေးလည်း ပြည့်စုံသလို၊ လှပတဲ့ဇနီးတစ်ဦးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကဗျာဆရာ မပျော်ခဲ့ဘူး။
ကဗျာဆရာကို နတ်သားက "ဘာကြောင့်မပျော်သလဲ? ဘာများကူညီရမလဲ?" လို့မေးတော့ ကဗျာဆရာက "ကျွန်တော့်မှာ ဘာမဆိုရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုပဲ လိုအပ်နေတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ပေးနိုင်မလား?" လို့ နတ်သားကို ပြန်မေးတယ်။
"ပေးနိုင်ပါတယ်။ အလိုရှိတာ တောင်းဆိုပါ" လို့ နတ်သားဆိုတော့
"ပျော်ရွှင်ခြင်းကို ကျွန်တော်လိုအပ်နေတယ်" လို့ ကဗျာဆရာက ပြောပါတယ်။
ကဗျာဆရာ စကားကြောင့် နတ်သားအခက်တွေ့သွားခဲ့တယ်။ တအောင့်ကြာမှ "ကောင်းပြီ" ဆိုပြီး ကဗျာဆရာပိုင်ဆိုင်သမျှ အားလုံးကို ယူဆောင်သွားခဲ့တယ်။
ကဗျာဆရာရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ယူသွားတယ်၊ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကို ယူသွားတယ်၊ သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကို ယူသွားတယ်၊ ဇနီးချောရဲ့ အသက်ကိုယူပြီး နတ်သားထွက်သွားခဲ့တယ်။ တစ်လကြာပြီးနောက် ကဗျာဆရာဆီ နတ်သားပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကဗျာဆရာက ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ လဲလျောင်းပြီး ဆာလောင်လို့ သေလုမျောပါး ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ နတ်သားက ကဗျာဆရာကို အရာအားလုံးပြန်ပေးပြီး ထွက်သွားခဲ့တယ်။
လဝက်လောက်နေပြီ ကဗျာဆရာကို နတ်သားသွားကြည့်ပြန်တယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကဗျာဆရာက ဇနီးသည်ကို ပွေ့ဖက်ပြီး နတ်သားကို ကျေးဇူးတင်နေခဲ့တယ်။ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကို သူရခဲ့လို့ပါပဲ....
ပျော်ရွှင်တဲ့ အရသာကို ခံစားခဲ့ဖူးသလား?
အထီးကျန်တယ်၊ ပျော်ရွှင်တယ်ဆိုတာ နှိုင်းယှဉ်မှုတွေကိုပြတဲ့ နာမဝိသေသနတွေဖြစ်တယ်။ အထီးကျန်တာကို မခံစားဖူးရင် ပျော်ရွှင်တဲ့အရသာကို ဘယ်လာခံစားတတ်မလဲ?
လူတွေကလည်း လူတွေပါပဲ.. လက်လွတ်ရခါနီးမှ၊ လက်လွတ်သွားမှ တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း သိတော့တယ်။ တကယ်တော့ ပျော်ရွှင်ခြင်းက ကိုယ်နဲ့အနီးဆုံး နေရာမှာ အမြဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ဗိုက်အရမ်းဆာတဲ့အချိန် ခေါက်ဆွဲခြောက်လေးတစ်ထုပ် ရှိတာလဲ ပျော်ရွှင်ခြင်းပဲ
အရမ်းမောပန်းနွမ်းနယ်တဲ့အချိန် ကျောခင်းစရာ နေရာလေးတစ်ခုရှိတာလဲ ပျော်ရွှင်ခြင်းပဲ
အားရပါးရ ငိုနေတဲ့အချိန် ဘေးမှာရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်က တစ်ရူးလေးတစ်ရွက် ကမ်းပေးလာတာလဲ ပျော်ရွှင်ခြင်းပဲ
မနက်နိုးလာတာနဲ့ လှပတဲ့ နေရောင်ခြည်ကို တွေ့နိုင်တာလဲ ပျော်ရွှင်ခြင်းပါပဲ။
ပျော်ရွှင်ခြင်းမှာ တိကျတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေ မရှိခဲ့ဘူး။ သာမန်ကိစ္စလေး တစ်ခုလည်း ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ပေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်အထိ ပျော်ရွှင်သလဲ? ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ အတိုင်းအတာကို ကိုယ့်ရဲ့ရောင့်ရဲတဲ့စိတ်နဲ့ပဲ ခန့်မှန်းဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ စိတ်မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ပြည့်နေခဲ့ပြီလား? ဒါမှမဟုတ် စိတ်ပျက်ခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်နေခဲ့သလား?
ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ တံခါးလာခေါက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ရင်ခွင်တံခါးကို ကျယ်ကျယ်ဖွင့်ထားပေးပါ။ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ကိုယ့်ရင်ဘတ်ထဲ အလုံးအရင်းနဲ့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါစေ....
နိုင်းနိုင်းစနေ ပျော်ရွှင်ခံစား ဘာသာပြန်သည်။
Posted by soe thiha at 6:01 AM No comments:
Posted by soe thiha at 6:39 AM No comments:
Posted by soe thiha at 5:40 AM No comments:
ကနဦးစွာ ဆရာတော် ပြောပြဆုံးမသည့်အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးကြည့်တော့ ကျွန်တော်ရင်ထဲ အတော် ပေါ့သွားပါတယ်။ ဒီစာလေးကို ၇ခေါက်၈ခေါက် ဖတ်လိုက်တယ် အမြဲမှတ်မိနေအောင်ပါ။ ဒေါသတရား ဖြစ်လာမယ့်စိတ်ကို ချုပ်ထိန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါလက်တွေ့ပါပဲ။ လောကီအတွက်ပါ အကြိုးပေးတဲ့ ဆုံးမသြ၀ါဒပါ။ ၀ိပဿနာတရားတွေကို အမြဲရှုပွားနေနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ဆရာတော်ရဲ့ သြ၀ါဒက ချက်ချင်းစိတ်ကို ငြိမ်းချမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကလေးကြည်လင်နေတဲ့အခါ ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားများကို အားစိုက်နာကြည့်လိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ၀ိပဿနာတရားအားထုတ်ကြည့်ပါ။ အင်မတန်ကို ချမ်းသာသုခ ရနေတဲ့အချိန်ပါ။ ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်း ဆရာတော် ပြောပြဆုံးမသည့်အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ပါစေ။ ဘ၀မှာ စိတ်အချမ်းသာဆုံးနေနိုင်ကြပါစေ။ တရားအရသာကို နှစ်သက်၍ တရား၌မွေ့လျော်၊ တရားနှင့်ပျော်ကာ ဒုက္ခခပ်သိမ်း ငြိမ်းအေး အောင်နိုင်ပါစေဗျာ(အစ အဆုံး ဖြစ်ပါတယ်)
Posted by soe thiha at 2:25 AM No comments:
[ဖေါ်ပြပါငွေ လဲလှယ်မှုနှုန်းထားများသည် ကိုးကားရန်အတွက်မျှသာ]
Myanmar National League Offical Website
သတင်း & မီဒီယာ
အိပ်မက်ကမ္ဘာမှာ - အိပ်မက်မက်ချင်သူများ
eainlwanthu သို့ ဝင်ရန် - eainlwanthu
Latest Activity on Myanmar IT Professionals
Activity Feed - http://maungmingyitar.jimdo.com/
SOFTARCHiVE.NET → MAiN PAGE
Google Accounts သစ်ဖွင်.ရန်
Movie - Myanmar Video
Myanmar MP3, Music & Songs
Welcome to shwevideos
ကြိုက်တဲ. movie ရိုက်